Sucuudiga oo markii ugu horreysay dumarka u oggoladay in bilaa muxram ay Hotel kireysan karaan?
Mogadishu - 20:08:35
Friday October 04, 2019 - 21:21:34 in Wararka by Super Admin
Guddoomiyaha Golaha Hay’adda Dalxiiska iyo Hiddaha qaranka Sucuudiga Axmed Al-Khadiib ayaa sheegay in haatan kaddib aan dumarka dalkaasi loo diidi doonin in ay Hotellada kireystaan ama ku dalxiisaan iyagoo aan lagu xujeyn doonin cid wehlisa oo muxram u ah.
Sida lagu qoray wargeyska ‘Cukaad’ ee Sucuudiga keliya waxaa qofta dumarka laga doonayaa in ay soo bandhigto Kaarkeeda aqoonsiga ama degganaansheheeda haddii aysan Sucuudi u dhalan ama buugga qoyska, haddii ay intaa sidanna Baasaboor.
Waxaa kale oo weliba haddii Haweeneydu aysan intaa oo dhan sidan xitaa ku filnaan karta haddii uu wehliyo qof qaraabadeeda ah, markaas oo la diiwaan geliyo qofkii qaraabadeeda ahaa macluumaadkiisa shaqsiga ah.
Hay’adda dalxiiska ayaa baabi’isay shuruudo adag oo horey uga yeellay xeerka dumarka, taasoo ay ugu horreysay marka hore in baaritaan shaqsi ahaaneed lagu soo sameeyo feelka qofkaasi iyo feelka qoyskiisa xittaa haddii qofka wax dalbanayaa ay wehliyaan xubno ka tirsan qoyskiisa, shardigaasina wuxuu ahaa mid qasab ku ahaa Sucuudiyaanka, dadka dalka deggan iyo kuwa ajaanibta ah ee dalxiiska ku yimaada.
Dhanka kale markii ugu horreysay ayaa dumarka Sucuudiga loo ogolaaday in ay qaadan karaan leysinka baabuurka oo ay kaxeyn karaan, halka sidoo kalena loo ogolaaday in ay qoran karaan Ciidanka.
Dhowaan ayay ahayd markii Sucuudigu billaabay Visa-ha ama dal ku galka dalxiiska 49 waddan oo u badan Yurub, kuwaas oo qaab fudud oo online ah Visaha ku dalban kara, sucuudigana soo booqan kara.